Momba anay - Shandong Xintengwei Import and Export Co., Ltd.
Fambolena Solutiobs ho an'ny mpiasa madinidinika
Ryagri dia mifantoka amin'ny fanomezana vahaolana ho an'ny fambolena kely.
Shandong Xintengwei Import and Export Co., Ltd.(RY AGRI), naorina tamin'ny 2014, dia miorina ao amin'ny tanànan'i Linqing, faritanin'i Shandong, Sina. RYAGRI dia orinasa matihanina izay manome milina sy fitaovana fambolena isan-karazany. Ny vokatra lehibe indrindra dia ny traktera, ny mpijinja, ny mpamboly, ny mpandeha, ny famafazana boom, ny famonoana tantanana, ny angadin-tsarimihetsika, ny harrows disc, ny subsoilers ary ny paompin-drano. Andraso. Ny orinasa dia manana rafitra kalitao sy serivisy tsara, ary naondrana tany Eropa, Czech Republic, Russia, Iran, South Africa, Nigeria, Ethiopia ary firenena hafa.
Tamin'ny taona 2016, nanomboka nanambola sy nanangana ny sampana vaovaon'i Etazonia voalohany ny orinasa - RY Agriculture Africa Atsimo, mahomby izahay manarona ireo firenena atsimon'i Afrika manontolo amin'ny ekipa manana tahiry, varotra ary ekipa serivisy eo an-toerana.
RY AGRI dia nahazo fanohanana matanjaka avy amin'ny orinasa ray aman-dreny Shandong Runyuan Industrial Co., Ltd., izay natsangana tamin'ny taona 1986 ary manana traikefa amin'ny famokarana fambolena mihoatra ny 30 taona. Runyuan dia nandroso ny welding, ny fikirakirana mekanika, ny fanangonana, ny sary hosodoko ary ny sary hosodoko, ny ivotoerana fikarohana sy ny fampandrosoana, ny tsipika fivoriambe mandeha ho azy maoderina ary ny tsipika fandokoana mandeha ho azy, ary ampiarahina amin'ny fanapahana laser, ny milina fanenjana sy ny milina CNC ao an-trano sy any ivelany Ary ny hafa fitaovana mandroso. sandry. Nandalo ny fanamarinana ny rafitra kalitao ISO9001: 2008.
Izahay dia mifantoka hatrany amin'ny fanomezana vahaolana amin'ny fambolena ho an'ireo manana kely, mikendry ny hanangana sehatra iray hivarotana sy serivisy ho an'ny milina fambolena.
- Tongasoa eto amintsika ny namana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao amin'ny fitsidihana sy fiaraha-miasa.